Bavale izikole bekhala ngothisha | News24
Bavale izikole bekhala ngothisha
isithombe: lethiwe makhanyaKusale kunje esikoleni ngemuva kokujikiswa kwabafundi ngoMsombuluko.
KUME nse ukusebenza ezikoleni ezimbili zasendaweni yaseSnathing, iSnathing Primary School kanye neMakholwa High School ngoMsombuluko mhla zili-14 kuMasingana (January) ngemuva kokuba abazali bedinwe bavala amasango bekhala ngokuthi akuxoshwe uthisha osephelelwe inkontileka kodwa ongafuni ukuhamba.
Laba bazali bathi lothisha obefundisa ibanga lika-Grade 4 wafika ngonyaka wezi-2016 ezobambela omunye owayethathe isikhundla sokubamba njengothishanhloko. Kuthiwa inkontileka yakhe iphele ngenyanga kaZibandlela ngonyaka owedlule kodwa ubegolozile engasafuni ukuhamba. Ngesonto eledlule ngesikhathi kuvulwa izikole kuthiwa lo thisha (i-Echo inalo igama lakhe) wagaleleka kulesi sikole waqonda egumbini lelo ekade elifundisa wathi akukho muntu ozongena kulona ngoba igumbi lakhe.
Ngesikhathi i-Echo ihambele lezi zikole ifice abazali bemile ngaphandle kwamasango bethi bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi akasekho ngempela lo thisha. Bafunge bagomela ukuthi uma beke bamubona nje ebuyela kulesi sikole bazophinda bazivale zingasebenzi.
“Into eyenze ukuthi sinqume ukuthi size sivale zombili izikole ingoba besifuna ukuzwakala kahle ngoba uma sikhuluma nje kuphela akuzwakali. Sikhathele ilo thisha odelelayo othuka nezingane zethu. Siyabonga nje nokuthi inkontileka yakhe iphelile asisamfuni sifuna paume aphele la angaphinde abuye,” kusho omunye wabazali naye obekhona.
UNks Tha Ngubane nongusekela Sihlalo wesigungu esimele abazali uthe lo thisha ubeseza ngenkani esikoleni ngisho sebemazisile ukuthi inkontileka yakhe iphelile waphinda wathola futhi nencwadi emazisayo ukuthi inkontileka iphelile.
“Sizamile ukukhulumisana naye simutshele ukuthi inkontileka yakhe iphelile kodwa uvele wasilandela obhuti bakhe abafike nezibhamu esikoleni basisabisa babuza ukuthi ubani lo oxosha udadewabo esikoleni. Ubedelela nje ewukhanda limtshelokwakhe ngoba saze samubizela umhloli kodwa wagoloza wathi yena akayi lapho. Nathi ayikho eneye into ebesesizoyenza ngoba ukuxoxa naye kusihlulile,” kubeka yena.
UMnuz Nhlakanipho Mkhize ongumzali aphinde abe ilunga lesigungu esimele abazali uthe lo thisha wafika ngonyaka wezi-2016.
“Bekumele agcine mhla ziyi-6 kuZibandlela kodwa wacela ukuba asale eseqedela kuphele unyaka kuvalwe izikole. Sithuke kabi futhi uma ngabe sesimbona esebuya kulo nyaka ngoba incwadi wayithola naye futhi uyazi.NgoLwesihlanu olwedlule sithe masikhuluma naye wathi akakwazi yena loko ekubeni azithola izincwadi etshela ngokuphela kwenkontileka yakhe. Into esiyifunayo nje ukuthi uMnyango wezeMfundo ululungise lolu daba ngoba asifuni ukuphinde simbone lapha emagcekeni esikole,” kubeka yena.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Sihle Mlotshwa uthe benguMnyango abahambisani nezenzo zokuthi kuvalwe izikole kuphazamiseke ukufunda. “Sihleli sibatshela abazali ukuthi zikhona izindlela ezilandelwayo uma ngabe befuna ukuzwakalisa izikhalazo zabo . Manje silindele isiFunda ukuba sisinikeze umbiko mayalana nalolu daba,” kubeka uMnuz Mlotshwa.